Lapabe Tia Maro - Fiaraha-monina vaovao
2. Fandraisan'ny fokonolona an-tànana ny fiainany sy ny ho aviny: FIARAHA-MONINA VAOVAO
Fiovan-penitra mahery vaika hakàna avy ao amin'ny fanjakana foibe ny fahefana ka hamindràna azy any amin'ny vahoaka mivantana amin'izay hanatsarany ny fiainany an-davanandro. Hamporisihina ny tsirairay handray anjara mavitrika amin'ny raharaha amin'ny sehetra rehetra eo anivon'ny fokontany misy azy. Ho jerena akaiky arak'izany ireo andraikitry maro sahanin'ny fanjakana foibe izay tokony hafindra:
mankany amin'ny ny faritra, hialàna amin'ny fivangongoan'ny fanapaha-kevitra aty an-drenivohitra ka mampitarazoka ny fampandehanan-draharaha.
mankany amin'ny fokonolona, ny fiaraha-monim-pirenena (société civile), mba hiantraika mivantana amin'ny vahoaka ny vokatsoan'ny ezaka rehetra atao ho amin'ny fandrosoana . Hapetraka arak'izany ny politika hanampiana sy hanohanana ny fiarahamonim-pirenena, ny fikambanana, ny fandraharahana mikendry ny soa iombonana (social business, entrepreunariat social), ny fiarovana ny tontolo iainana (environnement).
lazaina mazava amin'ny vahoaka manontolo ny zava-misy marina (informations) mba hahafahany mandray ny fanapahan-kevitra marina sy mahomby.
Homena adidy bebe kokoa ny vahoaka amin’ny fitondràny ny fiainany. Hajanona amin’izay ny fomba taloha izay mitondra ny vahoaka ho toy ny zazakely.
Hanoratra aminay: Lapabe Tia Maro
Hiverina pejy voalohany
Toko telo mahamasa-nahandro
Ny ankamaroan’ny Malagasy, leon’ny lainga tsara lahatra sy tofoky ny fanarotsaronana ny hevitra mety hampisara-bazana, dia vonona hiatrika amim-pahendrena sy amim-pahatoniana ny marina
2. FIARAHA-MONINA VAOVAO
Mazava fa ny fomba azo antoka hahatafitàna ny fampianarana dia ny fanaovana izany amin’ny teny voafehin’ny mpianatra dia ny tenin-drazana izany.